Indlela ukukhetha laxatives kwesokudla.
I laxatives ikhemisi zidayiswa ngaphandle kadokotela, ziningi, futhi noma iyiphi wemithi utawuniketa ukukhetha ongakhetha eziningana. Uma zisetshenziswa kanye kuphela, akukho okubi ngalokho, ngokuvamile, akukho. Okubi nakakhulu, uma ukuqunjelwa zenzeka njalo. Lapha kubalulekile ukuqonda, funa imbangela futhi aphathe ngayo ukudambisa okwesikhashana isimo laxatives, ngoba awayilaphi, kodwa susa izimpawu nje kuphela. ukusetshenziswa eside ingadala umonakalo zempilo ezingathi sína.
Kukholakala ukuthi uma kwesitulo wayengekho izinsuku ezimbili, bese kuba ukuqunjelwa, futhi kudingeka sithathe laxatives. Ngokuyinhloko, ukuqunjelwa - Kuyaziwa ngempela. Engingakusho nje weqa isikhathi kokujwayelekile wamathumbu ukunyakaza, overdo, futhi ukuqunjelwa enikeziwe. Kuvamile lokhu kuyiwe, isibonelo. Ngokwezibalo isiRashiya, futhi ukuqunjelwa zenzeka 40% abantu. Ngokuvamile kabi abesifazane, futhi labo phila ngakhethi ukuphila umzimba. Ukuqunjelwa ezisuka kusukela izimbangela ezizimele (operation uhambo, njll), isifo akuzona, futhi ngokuvamile ukunweba ngokwabo, noma umthamo izidakamizwa ngokwanele olulodwa kungaba Lokudabuka isitshalo.
ukuqunjelwa avamile kungadalwa ukuphila umzimba, imikhuba yokudla emibi, izifo ze-isisu kanye ikholoni, futhi ingquza. Kukhona ukuqunjelwa zezinzwa (unhlangothi, isifo i-Parkinson, yi-multiple sclerosis, umgogodla cord yokulimala). On ukubambezeleka esihlalweni kungathinta sikashukela, cishe zonke izifo endocrine. Ngisho ukucindezeleka eside kungaholela ukuqunjelwa. Yingakho isinyathelo sokuqala ukuba uthole imbangela futhi.
Kuye imbangela ukuqunjelwa, laxatives ukusebenzisa elinye lamaqembu ezintathu lapho ingahlukaniswa nge mshini nemiphumela wamathumbu.
ezizihluphayo Chemical. Lezi zihlanganisa ezinye izidakamizwa ezingamakhambi ezinjenge- leaf Senna, ijikijolo lingase amagxolo, rhubarb izimpande, njll, kanye zokwenziwa izidakamizwa: phenolphthalein, izafenin, lapha Ungahlanganisa uwoyela ocolisekileyo.
ezishukumisa Mechanical. Lezi zihlanganisa nosawoti laxatives, okuyinto athutha kuthinta ulwelwesi odongeni emathunjini, kuyilapho diluting okuqukethwe emathunjini nokukhuphula umthamo yayo.
Softeners. Lokhu ngokuvamile alimondi, amafutha omnqumo aye ukuthambisa mass emathunjini bese lula ndima yayo ngokusebenzisa leli pheshana emathunjini.
Futhi ingahlukaniswa laxatives ngezikhwepha ngaphezu kwakho.
Imithi yokuhlambulula isisu (iqembu umpofu). Lokhu magnesia, isibabule, laminarid, uketshezi upharafini nabanye. Le mithi musa kubangele isifo sohudo, kodwa umane ukusiza kukhucululwe wamathumbu kahle.
Laxatives. Lokhu hay yemifino, rhubarb, ijikijolo lingase, ezidakamizweni - izafenin, uwoyela ocolisekileyo, bisacodyl. Leli qembu ingase ihlanganise zezinkambi ezivamile laxative (zezinkambi isisindo ukulahlekelwa kanye).
Pronosnye. Leli qembu ingase ihlanganise nosawoti ukwakhiwa okuholela indle okuxekethile, okubangela ezingqubuzanayo ezaziyaluzisa emathunjini bese peristalsis anda.
Ngokuvamile iphendukele abangenalo leli khono, uma kukhona isidingo ngokushesha kukhucululwe wamathumbu (uma kwenzeka ubuthi, ngaphambi nje kokuba ahlinzwe noma survey ezithile). Laxatives ukuqunjelwa (imvelo oyingozi futhi ezingalapheki) - okungukuthi, njengoba umthetho, amalungiselelo emacembu lamabili ekucala.
Akumelwe sikhohlwe ukuthi kukhona isimo lapho laxatives ngokuphelele contraindicated, kuba ngokuyinhloko isimiso wamathumbu, iyiphi ukuvuvukala peritoneum (isithasiselo, isibonelo). Ungazithathi njengendlela imfiva, abesifazane abakhulelwe nabancelisayo.
Ngakho, akukho kungenzeka kangcono igama laxative ngoba esimweni ngasinye kunalawo esekwa zingahluka izidakamizwa. Kungcono akunqunyelwe iseluleko wemithi, futhi athintane nodokotela uma ukuqunjelwa zenzeka nabanye imvamisa.
"Dinamizan": yokusetshenziswa, izinkomba, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Indlela yokusebenzisa lesi sidakamizwa "Cefazolin" (imijovo)
U-Pamela Anderson ebusheni bakhe akazange azibheke njengomhle!
Umculi Russian Elizaveta Berezovskaya
Kusukela ingoma amazwi angeze sasula: inzuzo ezingalindelekile inhlamba
UNIVERSAL ISISEKELO OF FBS
Kungani ingane a isisu esikhulu?